US မှာဆက်သွယ်ရေး | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနေကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးလပေါင်းများစွာစဉ်အတွင်း, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသောအရာတို့ကိုစာရေးနားလညျမှုလှဲမှားပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အမှားကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်. အပြုသဘောဖြစ်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ - တစ်ယောက်ယောက်ကိုရိုင်းစိုင်းသို့မဟုတ်ယုတ်ပုံပေါ်လျှင်, remind yourself that it may be because ofacultural difference. Do not assume they areabad or rude person.
သင်ကဆိုပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုနားမလည်ခဲ့လျှင်, သူတို့ကဆိုပါတယ်ဘယ်အရာကိုပြန်လုပ်ပါရန်လူတစ်ဦးကိုမေး. သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရိုးရှင်းစွာပြန်ပြောသူတို့ကိုမေးဖို့. မေးမြန်းခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်မစိုးရိမ်.
• They may be “နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သော။” Being politically correct means trying not to say things that will offendaparticular group of people. ဥပမာ, many Americans do not tolerate racist or sexist jokes. ဤသည်မှန်ကန်မှုတစ်ခုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်. But it will cause problems if others are disrespectful.
• အများစုမှာအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အလေးချိန်အကြောင်းကိုပြောပြရန်မကြိုက်ဘူး, သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုပ်ငွေဘယ်လောက်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အလေးချိန်အကြောင်းကိုတစ်ခုခုပြောပါလျှင်, အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွ, သို့မဟုတ်ဘယ်လိုကြွယ်ဝသောသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုသူတို့ဖြစ်ကြသည်, သူတို့စိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါ.
• သူတို့သွားသို့မဟုတ်ဘယ်မှာသူတို့နထေိုငျရာပြည်သူ့သင်တို့ကိုလည်းပြောပြချင်မပြုစေခြင်းငှါ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးခဲ့လျှင်, “သင်ဘယ်သွားမလို့လဲ?” သူတို့သည်သင့်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ထင်စေခြင်းငှါ.
There are some topics that are easier to talk about without havingacommunication problem. ယဉ်ကျေးမှုများမှာကလေးများနှင့်အားကစားကိုဖြတ်ပြီးဘုံဒေသများ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောနေတာတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, talk about these topics!
Most Americans will talk “သေးငယ်တဲ့ဟောပြောပွဲ” မင်းနဲ့အတူ. သူတို့ကသင်ပုံကိုမေးပါသို့မဟုတ်ရာသီဥတုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်. This is considered polite. တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါတယ် အကယ်., “နေကောင်းလား?” အခြားလူတစ်ဦးနီးပါးအမြဲပြောပါတယ်,”ကောင်းသော,” “ကောင်းသော,” သို့မဟုတ် “အိုကေ,” သူသို့မဟုတ်သူမဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်မမှန်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်.
In the USA, လူတွေပြောပါ “ကျေးဇူးပြု” သူတို့တစ်ခုခုတောင်းသောအခါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” သူတို့တစ်ခုခုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုကူညီပေးသည်သည့်အခါ. အမေရိကန်တွေပင်နည်းနည်းအရာများအတွက်အခြားသူများကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လေ့. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်ပွင့်လင်းတဲ့တံခါးကိုရရှိထားသူပါလျှင်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျလက်ဆောင်တစ်ခုပေးသည်ဆိုပါက, သင်သည်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောသင့်ပါတယ်.
Learning English is one of the most important things you can do to help you adjust to life in the USA. If you do not speak much English, သင်အွန်လိုင်းနှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အခမဲ့အတန်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. You can find ways to learn English online or in your local community.
One of the best ways to learnanew language is to immerse yourself in it and to listen to italot. သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားထောငျနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးစား. အသံထွက်, သို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာအမှုအရာဟူမူကား, အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့လေသံနှင့်အရာစကားသည်သင်ကိစ္စကိုလည်းအလေးပေးပြောကြား. သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာတစ်ခုခုပြောနေကြောင့်သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်ခံစားရစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အမေရိကန်တွေသငျသညျနားမလညျနိုငျပါသညျ. အားလုံးအမေရိကန်တွေနိုင်ငံခြားအသံထွက်ဖို့အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်.
ကျနော်တို့အခြားလူများနှင့်အတူတွဲရှိတဲ့အခါ, ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအရေးပါသည့်နည်းလမ်းဆက်သွယ်ပြောဆို: verbally (using words) and nonverbally. Nonverbal communication means the way we use our body to communicate. It includes:
အချို့လူများက nonverbal ဆက်သွယ်ရေးကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေအမှန်တကယ်စကားလုံးများကိုထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ထင်. ဒါဟာသူတို့အခြားသူများကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ကိုးစားလျှင်လူဦးဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်.
ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ nonverbal ဆက်သွယ်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသုံးပါ. ဤတွင်အမေရိကန်တွေ nonverbal ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးနည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်:
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအရေးကြီးသောပြောဆိုမှုများစဉ်အတွင်းမျက်လုံးချင်းအောင်. သငျသညျမျက်လုံးချင်းလုပ်မထားဘူးဆိုရင်, people may think you are lying or something is wrong. သင်၏မျက်စိသို့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုမကြာခဏပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်, ဉာဏ်ကောင်းသော, နှင့်မျိုး. သငျသညျလူရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမျက်စိကိုသို့ကြည့်ရှုကြပါဘူးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလာနေလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့လုပ်ဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း.
Americans smilealot to show to be polite and to who that everything is okay. သငျသညျသစ်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ, သူတို့သူတို့ကိုသင်မှာပြုံးဖို့မျှော်လင့်ထား.
သူတို့ဖြည့်ဆည်းရသောအခါအများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့သည်လက်ကိုလှုပ်. သူတို့ပြီးသားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသိလျှင်တစ်ခါတစ်ရံလူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖက်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျမသက်မသာလှုပ်လက်၌ခံစားရလျှင်, သငျသညျလကျကိုလှုပ်ခါရန်မလိုပါ.
In the USA, လူတွေကိုပိုရှိသည် “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသ။” သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှစကားပြောနေကြသည်လျှင်ဒီကိုဆိုလိုတယ်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးခြေမကွာသင့်ထံမှအနည်းဆုံးအားမတ်တပ်ရပ်ဦးမည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်သူ့ရန်သွန်သင်ထားပါသည် “မတ်တတ်ထပါ” သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်များအတွက်. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ဆိုလိုတယ်, သူတို့အမှတ်သက်သေပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားသင်နှင့်အတူငြင်းခုန်စေခြင်းငှါ. သင်သည်ထိုတန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုကနေလာမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလွန်မသက်မသာရှိနိုင်ပါသည် “မကျြနှာကိုချွေတာ။” အချို့နိုင်ငံများရှိ, အငြင်းအခုံသို့ရတဲ့သငျသညျမကျြနှာကိုဆုံးရှုံးဆိုလိုခြင်းငှါ.
အမေရိကန်တွေအမျက်ဒေါသ၏ထွက်သို့မဟုတ်ရန်ပွဲဖို့မငြင်းခုန်, သူတို့မှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဘယ်ကြောင့်သင်တို့မူကားကိုပြသ. Arguing is generally accepted as part of the conversation, သငျသညျအလွန်ကျယ်လောင်စွာစကားပြောနေကြသည်မဟုတ်လျှင် (အော်ဟစ်) သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းဘာသာစကားကိုသုံးပြီး. ကျောင်းသားများခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ပင်၎င်းတို့၏ဆရာများနှင့်အတူသဘောမတူရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်. ကလေးများဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူငြင်းခုန်စေခြင်းငှါ. အလုပ်သမားများကသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေသဘောမတူနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး. တခါတလေ, especially in American politics, လူတွေကိုဘာမျှမအမှုကိုပြုရနိုင်အောင်အများကြီးငြင်း!
သင်တစ်ဦးအငြင်းအခုံအတွက်မသက်မသာခံစားရလျှင်, သငျသညျအဆင်ပြေစကားမခံစားရဘူးကြောင်းရှင်းပြဖို့အဆင်ပြေသည်. သို့သော်, သင်ကသူတို့ကိုသဘောမတူသို့မဟုတ်အခြားသူတို့သည်သင့်သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်သဘောတူထင်စေခြင်းငှါလူတွေကိုပြောပြရန်သင်ယူဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
သငျသညျသစ်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုမှညှိကြသောအခါအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟာသဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကလူန်းကျင်နားမလညျတဲ့ဟာသလုပ်စေခြင်းငှါ,. ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျနားမလညျတဲ့ဟာသလုပ်စေခြင်းငှါ,. ဟာသယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, တစ်ခါတစ်ရံသင်ဟာသနားလည်လျှင်ပင်, သင်ကရယ်စရာဖြစ်ပါသည်မထင်စေခြင်းငှါ,.
အတော်များများကအမေရိကန်တွေပြက်လုံးကိုပြောပြလို. တခါတလေ, ပြက်လုံးရယ်စရာဖြစ်နိုင်ပြီးလူတိုင်းရယ်. တခါတလေ, ပြက်လုံးထိုးစစ်နိုင်ပါတယ်. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ကျားမအပေါ်အခြေခံပြီးဟာသပြောပြစေခြင်းငှါ,. ဤလူနှင့်ပြက်လုံးနိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သောမဟုတ်! တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျတော့လို့တဲ့ဟာသကိုပြောပြခဲ့လျှင်, သင်ကထိုးစစ်သို့မဟုတ်မလေးစားရှာပြီးသင်ကြင်နာမဆိုပိုပြီးပြက်လုံးကိုပြောပြဖို့မသူတို့ကိုမေးယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောနိုင်ပါသည်.
Freedom of speech is protected by the United States Constitution. ဒီအတွက်ကြောင့်, the American media can make jokes about things that people in other countries may not joke about. ဥပမာ, there are some US newspapers that are “ပြက်ရယ်စကား” သတင်းစာများ - သူတို့သရော်စာသို့မဟုတ်ရယ်စရာကြောင်းသတင်းရေးရန်, ဒါပေမယ့်မစစ်မှန်တဲ့. ဥပမာ, အဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်သရော်စာသတင်းစာစက္ကူ ကြက်သွန်နီ မြောက်ကိုရီးယား၏နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြောင်းပုံပြင်ကိုရေးသားခဲ့သည်. သူတို့ကသူကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးချောမောလူကိုမဲပေးခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်. မြောက်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်အတွက်အချို့လူများကဇာတ်လမ်းစစ်မှန်တဲ့ထင်. ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကမယ့်ဟာသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်.
In the USA, some people like to watch comedies on television. They might also like to watch professional comedians on TV or in theaters and clubs. တခါတလေ, American comedies and comedians can be offensive.
အချို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားလှည့်စားလို. အမေရိကမှာ, ဧပြီလတွေ့ကြုံရလို့ခေါ်တဲ့အားလပ်ရက်လည်းမရှိ’ နေ့. ဒါဟာဧပြီလရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့၌ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်နေ့ရက်တွင်, များစွာသောလူလှည့်ကွက်ကစားရန်ကြိုးစားလို. ဥပမာ, အလုပ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ကမဖြစ်သည့်အခါတစ်ခုခုမှန်ယုံကြည်စေခြင်းငှါ,. ပြည်သူ့သည်ဤပြက်လုံးကိုပဌနာ “နောက်ပြောင်မှုများ” သို့မဟုတ် “သင့်ရဲ့ခြေထောက်ဆွဲ။”
US မှာ, written contracts and verbal agreements are important.
သဘောတူညီချက်များပုံမှန်အားဖြင့်နှုတ်များမှာ. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ရာရန်သင့်အားမေးပမေညျနှငျ့သငျဟုတ်ကဲ့ပြောပါသို့မဟုတ်လုံးဝမ. ဤသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကမှာ, နှုတ်သဘောတူညီချက်များယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်အလေးအနက်ထားကြသည်. တခါတလေ, သင်တစ်ဦးနှုတ်သဘောတူညီချက်လုပ်သည့်အခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးလကျကိုလှုပ်ခါစေခြင်းငှါ. လက်တို့ကိုလှုပ်သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးသဘောတူညီမှုဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်.
One problem with verbal agreements is that sometimes people can misunderstand. ဥပမာ, you may makeaverbal agreement with someone that you will meet them at5pm that day. ဒါပေမဲ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်သင်နက်ဖြန်နေ့၌အဓိပ်ပာယျထငျ.
သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုရန်သဘောတူခဲ့လျှင်, သင်သည်ထိုသဘောတူညီချက်ဖြည့်ဆည်းဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုသင်သဘောတူညီချက်ဖြည့်စွက်လို့မရဘူးအသိပေးကြောင်းဖြစ်စေကြောင်းအမေရိကန်တွေရန်အရေးကြီးပါသည်က. This is true even for something small. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကနေ့လယ်စာရှိသည်နှင့်သင်ဟုတ်ကဲ့ပြောသငျသညျတောငျးလြှငျ, သငျသညျနေ့လယ်စာကိုသွားသင့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ကနေ့လည်စာအတွက်အချိန်မီသငျသညျမရောကျနိုငျကသူတို့ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်.
ကန်ထရိုက်စာချုပ်များအဘယ်အရာနှစ်ခုဖော်ပြကြောင်းသဘောတူညီချက်များရေးထားလျက်ရှိ၏ (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) လူတွေကိုရန်သဘောတူ. သင်တစ်ဦးတိုက်ခန်းသို့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါသင်တစ်ဦးငှားရမ်း sign. သင်တစ်ဦးအလုပ်စတင်နိုင်သည့်အခါ, သင်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်စာချုပ်ခံခြင်းငှါ. သငျသညျခရက်ဒစ်ပေါ်ကားတစ်စီးဝယ်လျှင်, သင်တစ်ဦးချေးငွေသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းငှါ,. ဤအရာအားလုံးသည်ကန်ထရိုက်များမှာ.
သင်တစ်ဦးစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့လျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကြောင်းစာချုပ်ဖြည့်ဆည်းဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ. ဒါကြောင့်သင်ကဂရုတစိုက်ဖတ်ပါအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. စာချုပ်အင်္ဂလိပ်လိုသည်ဆိုပါက, သင်ကဘာသာပြန်ဆိုအကူအညီတောငျးဖို့လိုပေမည်. ရိုးရှင်းစာချုပ်များအတွက်, you can askafriend or you can ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ and we will try to help you understand the contract. ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံစိုးရိမ်ခဲ့လျှင်, အလုပ်, သို့မဟုတ်တရားဝင်န်ဆောင်မှုများ, သငျသညျအကွံဉာဏျများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ဆိုသူကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်သင့်အမှုတွဲကိုင်မေးရန်လိုပေမည်.
မရဖြစ်ရပ်မှန် - ဤအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုအမျိုးဖြစ်ကြ၏, just ideas to help you better understand why an American may be actingaway that is different to what you are used to. American ways and culture are not better or worse than other ways – just different.